Kuedza Kwevanhu Kukunda Rufu: Kukunda Kwatingaita Rufu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | KANA MUNHU AFA ZVATOPERA HERE?
Kuedza Kwevanhu Kukunda Rufu
MAMBO QIN SHI HUANG
MUTSVAKURUDZI PONCE DE LEÓN
Rufu muvengi anotyisa. Tinoita zvose zvatinogona kuti tirukunde. Zvingatiomera chaizvo kubvuma kana munhu watinoda afa. Kana kuti patinenge takagwinya tichiri vaduku, tingagara tichizvinyepera nefungidziro dzokuti hatisi kuzofa.
VanaFarao vekare vaiva pamberi panyaya yokuda kurarama nokusingaperi. Vakapedza nguva yakawanda youpenyu hwavo uye hwezviuru zvevashandi vavo vachiedza kukunda rufu. Mapiramidhi avakavaka anoratidza kushanda nesimba kwavaiita vachiedza kuti vararame nokusingaperi, uyewo kukundikana kwavakaita.
Madzimambo ekuChina akaedzawo kuti ararame nokusingaperi, asi aiita zvakasiyana navanaFarao, nokuti ainwa misanganiswa yezvinhu zvakasiyana-siyana. Mambo ainzi Qin Shi Huang akarayira kuti masayendisiti ake atsvage mushonga waizoita kuti arege kufa. Asi mimwe misanganiswa yavo yakawanda yaiva nemuchetura, uye zvingangodaro kuti akaurayiwa nemumwe wemisanganiswa yacho.
Muna 1513, mumwe mutsvakurudzi wekuSpain ainzi Juan Ponce de León akatenderera mugungwa reCaribbean achitsvaka tsime remvura yaizoita kuti ararame nokusingaperi. Paaitsvaka tsime iri, akasvika munzvimbo iri muU.S.A., yaakapa zita rokuti Florida, asi akazofa makore mashomanana pashure pokurwisana nezvizvarwa zvokuAmerica. Zvisinei, hapana tsime rine mvura inoita kuti vanhu vararame nokusingaperi rakambowanika.
VanaFarao, madzimambo, uye vatsvakurudzi, vose vaitsvaka kukunda rufu. Uye ndiani wedu angashora zvavaiedza kuita kunyange zvazvo tingasafarira nzira dzavaishandisa? Kunenge kuti tose zvedu hatidi kufa.
TINGAKUNDA RUFU HERE?
Nei tisingadi kufa? Bhaibheri rinotsanangura chikonzero chacho. Rinotaura nezveMusiki wedu, Jehovha Mwari, * richiti: “Akaita zvinhu zvose zvakanaka panguva yazvo. Akaisawo nguva isingagumi mumwoyo mavo [vanhu].” (Muparidzi 3:11) Tinoda kurarama panyika tichinakidzwa nokusingaperi, kwete kwemakore 80 chete. (Pisarema 90:10) Ndizvo zvatinoshuva mumwoyo.
Mwari akaisirei “nguva isingagumi” mumwoyo medu? Akazviitira kuti angotirwadzisa here? Izvozvo hazvina musoro. Asi Mwari anotivimbisa kuti rufu ruchapera. Bhaibheri rinotaura kakawanda nezvekubviswa kuchaitwa rufu uye vimbiso yaMwari yokupa vanhu upenyu husingaperi.—Ona bhokisi rakanzi, “Kukunda Rufu.”
Jesu Kristu pachake akataura zvakajeka kuti: “Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.” (Johani 17:3) Izvi zvinoratidza kuti rufu ruchapera. Asi Jesu anoratidza kuti Mwari chete ndiye anogona kukunda rufu.
“Achaparadza rufu nokusingaperi, uye Changamire Ishe Jehovha achapukuta misodzi pazviso zvose.”—Isaya 25:8.
“Izvi ndizvo zvinodiwa naBaba vangu, kuti munhu wose anoona Mwanakomana otenda maari ave noupenyu husingaperi.”—Johani 6:40.
“[Tine] tariro youpenyu husingaperi iyo Mwari, asingamborevi nhema, akapikira kare kare.”—Tito 1:2.
“Achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo.”—Zvakazarurwa 21:4.
Rufu Harusi Mugumo Wezvose!
Nei Jesu akafananidza rufu nekurara? Tingadzidzei panyaya dzemuBhaibheri dzevanhu vakamutswa?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kuedza Kwevanhu Kukunda Rufu